Tixdan maansada ah waxaa curiyey Cali Maxamuud Xiirane oo ku nool magaalada London ee carriga ingiriiska, waxayna ku soo biirtay taxanaha Doodwanaag 11/9/2004, Waana maansadii 19aad ee silsiladda Doodwanaag.
Ujeeddo:Maansadu waxay qeexeysaa in addoomaha ilaahay oo idil ay hal aabbo oo Aadan ah (C.S.) ka soo farcameen, sidaa awgeed aysan waxba is dheereyn xagga abtirsiga. gaar ahaan waxay sii tilmaamaysaa in Ummadda la yiraahdo Soomaalida ee ku nool Afrikada bari ay wadaagaan wax badan oo wanaag ah oo uu eebbe ku mannaystay. Isla markaana ay haystaan dhul muhiim ah oo aad u nacfi badan.
Intaa kadib maansadu iyadoo ka duulaysa ujeeddada guud ee silsiladda Doodwanaag oo ah in looga doodo si miyir qab ah dhibaatooyinka jira iyo waxyaabihii sababay, isla markaana xalka la baadi goobo, ayay maansadu si aad ah ugu dheeraatay qodob aad u muhiim ah oo uu hal-abuurku u arko inuu ka mid yahay arrimaha sababay musiibada maanta ummadda ku habsatay.
Arrinkan uu curiyuhu ka hadlayo oo ah Dulmiga soo jireenka ah ee takoorka iyo waliba ku tumashada xuquuqda kan tabarta yar, ayuu aad ugu dhaliilayaa bulshada oo uu u arko in aysan taasi qaldantahay, waayo waxa isaga dhex yaacay wixii samaa iyo wixii xumaa!!. Curiyuhu wuxuu is barbardhigayaa dhowr tusaale oo ah arrimo ay bulshadu ka faanto in lagu faanase mudan, isagoo sidoo kale xusaya dhaqammo ay bulshadu ku faanto, oo dhab ahaan in laga faano mudan.
Ugu dambayntii wuxuu Cali ummadda ugu baaqayaa in ay degdeg uga towbad keenaan qaladaadkaa soo jireenka ah ee ay jaahilnimadu keentay ayna raalli galin ka dhiibaan dulmiga aanay mudnayn ee ay muddada aadka u dheer walaalahood la daba joogeen. Sidoo kalena isagoo ka codsaday dulmaneyaasha cafis iyo inay la yimaadaan samir iyo dulqaad badan taasoo rabbi ka abaal marin doono, kana digtoonaadaan dabinnada uu cadawgu maleegi karo isagoo ka faa’iideysanaya arrintaan haybsooca ah iskana dhigaya mid u danaynaya dadkaan ayaga ah, laakiin danihiisa u duul ah.
Dadkoo laysku wada daray
Ilaah darajo siiyoow
Duqii aadan baa dhalay
Waxan nahay durriyadiis
Dirka ummad quraan nahay
Docda bari ku naallaa
Daa’ in baa ku mahadloo
Nimco badan ku duugoo
Dalku waana dihanyahay
Waana daakhil weynyahay
Duunyo waa ka buuxdaa
Dahab waa dhex yaallaa
Nimcaa laga durduurtaa.
Diin quroon rumeyniyo
Doodda hadalka keenniyo
Diirkaan ka simannahay
Dad walaalahaan nahay
Waa dan iyo xeeshiis
Dhanka kale haddaan dayo
Arrin baanan iga dagin
Doodduna waxay tahay
Haddaan diir wadaagnoon
Nahay duul is dhalayoo
Islaannimo ku daahira
Maxaa laysku dilayaa?
Maxaa duhur dharaareed
Dumar loo kufsanayaa?
Maxaa loo daldalayaa?
maxaa loo dafaayaa?
Maxaa dooxitaan iyo
Dagaalada na badayoon
Nabaddii u diidnoo
Samihiina naga dedey?
Horta yaa dalbadayoo
Fitno deeq ka dhigayoo
Sharta soo dageey yiri?!
Sadarradood dul joogsaday
Danahood u duulka ah
Wixii noo darraa iyo
Halka naga dalooshee
Daad nooga soo galay
Duruustii ay bixiyeen
Shay laga il duufoo
Oon laga digtoonayn
Dadku badi u moogyahay
Oo qoowmkan dummiyoo
Dam ka siiyay baa jira !!!
Anigoo daldalan iyo
Aan jeclayn darooryiga
Doodwanaag ku soo daray
Miinada la duugiyo
Cudur naga dahaarnaa
Inaan daah ka rogo oo
Si bal daawo loo helo
Nabarkii an dooxoon
Wixii dagay ka daadshoon
Maddiil uga dillaacshaa .
Haddaan dulucda maansada
Ujeeddada u daadego
Wax dabiib ka raagoo
Nagu daahay baa jira!!
Haddaan sii durkiyo oon
Doodda hoos u sii galo
Kuu qabiil derderey iyo
Mid qabkiisu dummiyiyo
Duf ku bexe halkiisee
Dammiin kaan ahaynoo
Daki garashadiis loo
Xaqa aan ka dudinoo
Dulmi aan u dhalannoow
Su'aalahan ku soo durug.
Ninka daawad dhicid iyo
Ducufadoo la baadiyo
Dadqalnimo ku faanoo
Dulmigaba ka taajira
Oo gacal ku duul iyo
Didso geel agoon iyo
Daydaynimo ku nool iyo
Midka qaanso daaco leh
Deerada ku baacshee
Bahallada la deriskeen
Isagoon dad soo dhicin
Dubta hilib ugaareed
Horto darajo yaa mudan
Oon dirac ku sheegnaa?!.
Dabbaalnimadu waa shile
Kuu dadkiisu doortoo
Dallacoo xil qaadoo
Dhigaalkii dantii guud
Qasnad gaar u duwayoo
Dibadaha wax gaystoo
Daar wayn ka jeexdoo
Dibi madaxi yeeshoo
Isagoo duddumo la eg
In mar kale la duubiyo
Inuu dallaco sii raba
Iyo tacbade diirrane
Duurkaa ku nooloo
Digaag xoolo haystoo
Digdigtaan la wado iyo
Aan colaadba daakhilin
U adeega duul kale
Oo dhaqanka diintiyo
Inaan nabad ku daaqniyo
Wax kastoo inoo dana
Colaaddoonan damin iyo
Wixii dabargo'eenna ah
Saxiixyada ku duugoo
Doolarkaan suntaa iyo
Dabbaabbaad la yiri hoo
Daarihii bilnaa iyo
Dhulkaagii ku soo dumi
Iyo midka dabaashee
Subax diiq markuu ciyay
Dooni horay u raacee
Kalluun dufan macaanoo
Qubo soo daldalayiyo
Mallaay dibadda loo diro
Oon dirac ku sheegnaa?!
Dareen culus i saaqoo
Ilmo dimbiq i leedahay
Wali dooddi kama bixin
Halkii ii darnayd iyo
Doogtii kamaan hadal
Dulucdaydu waa wali
Aanna sii durduriyee
Ay daxashu fuushiyo
Ninkii daasad uu helay
Daash weyn u waabtee
Damalluu u shiday iyo
Dab ku soo dhalaalshee
Ku garaacay dubbahoo
Dowladdoon ku caawinin
Digsiyiyo suxuun iyo
U diyaarshay maacuun
Dalka soow wax uma qaban
Mise waa la weel duwi
Dambi buu kasbadayoo
Hoos baaba loo dayi?
Isagoon dakane iyo
Dulmi looga yaabayn
Daqosh kii samaystee
Dadaal lagu ammaaniyo
Wax kastaba dabbarayee
Wixii naga dillaaciyo
Dacaskiyo kabaha tola
Hoos baaba loo dayi?!
Haddii aan dubkeenniyo
Degelkaan ku noolniyo
Danwadaagba aan nahay
Hadba dumarka tuu rabo
Ama damac ka soo galo
Haddii aanay diidayn
Isna anshax la duro iyo
Ceeb uu ka daahiray
Derisnimo u dheertahay
Dadabgalid markay tahay
Dermo golaha ay taal
Waayeel la soo dumo
Laga doono ehelkeed
Maxaa loogu diidaa?
Sheekada dellegan iyo
War daciyo khurraafaad
Maxaa loo daldalayaa?!.
Ilmo dibiq i leedahay
Dulucdaydu waa wali.
Aqoonyahan da’ wayn iyo
Culimada dikrida oo
Axaadiista daba gala
Iyo ruux damiirloow
"U darnoow walaalkaa"
Maxaa loo daliishaday?!
Beeni way ku dilataa
Waa lagu dambaabaa
Dabka naartey kugu ridi
Runta yaan la dabamarin
Caado yaan la doorbidin
Xaqa yaan la duudsiyin!.
Haddey dhego daloolaan
Qalbi naga dahaarneyn
Aayadaha la diideyn
Cudurradan na daashaday
Abaaraha dalkii rogay
Darbiyada na kala xiray
Bulshadaa la kala diray
Tuugannimo la doorbiday
Xirfadaha dib loo dhigay
Waxa loogu dowgalay
Aqoon darrida diintiyo
Balaayo aan dagaynoo
Dusha nooga raran wali!.
Nabsi waa ma daaloo
Hadduu sida diyaarado
Dhaqso soo degdego iyo
Diiddiin siduu wado
Hadduu soo yar daahaba
Mar buu soo degaayoo
Deegta kaa koraayoo
Dacay kaa lulaayoo
Ku dabraa sidii awr!
Kibir lagu duqeeyoo
Tookh lala dul joogoo
Miyaan dacarta loo degin?
La durduuran maantaba?
Waxaa kuu daliil cada
Dacda waanagaa naal
Abaaraa is dabayaal
Waa taa ka daaf iyo
Daraf duunyo eber tahay
Waa taa an diihaal
Darxumada ku sugannahay
Dibadaha u yaacnoo
Dawarsiga ku wada nool!.
Meel dulmi ka dhacayoo
dhiig islaam ku daataan
Dambar laga dhameynoon
Dowladimadii waa taa
Daafida la dhaafsaday
Waa kaas danaha guud
Waa taa daciifnimo
Daafac aan la kari karin
Waa taa aan dammane iyo
Wada nahay ka sii daran
Waa taa aan duggaaggiyo
Cadowgeen u daggannahay!!
Talo waa tan duushoo
Heshiiskii la dabarjaray!.
Waa tan duubabkeennii
Doqomadu ay laayaan
Dallaal aniga ii noqo
Lagu dilo nin-doorkii
Inay doodda celiyaan
Waa tan laga daboolaba
Kii nabad daneeyaa
Xabsiyada u daadego
Waa taa Diktoorkii
Damiin uu waxbarayaa
Waa taa ducaaddii
Dibjirradu ay gowrici
Duuflaalka waa kaa
Dalkxiiskeennii waa kaa
Duggaafadaha loo rogay
Darbijiif dhallaan yara
Dugaag uu ku cunayaa
Lagu gado daroogada!
Doofaarka waa kaa
Qaar daanka galiyeen
Dhaqankii ay duubeen
Waa taa rag diracyo leh
Qaar dhegaha loo duray
Waa tan nalagu diimoo
Qaar nagu digtaanoo
Diiratadii gunta ahayd
Duqsiyadii ku caan nahay!!
Walaakeed ku diraneey
Cadowgeed u dabaceey
Ilaah janno dabaalsii
Kugu sheegay doorkii
Oon murtidu kugu duxin
Hadal lama dul fuulee
War hooy maan idiin digo!
Doontaad la socotaan
Way sii dagaysaa
Oon xummaanta duuggaa
Duco iyo run sheeg iyo
Lagu doorin toowbada
Midka daab u haystiyo
Midka gaas ku daadshiyo
Kii taraq ku daariyo
Kan shiraaca duubtiyo
Midka dakhalka jebin raba
Haddaan ciidan loo dumin!.
Hirar dabaq ka wayniyo
Markay halistu darantahay
Ina doowdar baan ahay
Anaa doolli dili jiray
Dhinacayga ii daa
Haddaan laga dallicinoo
Aan geesi daacadoo
Dersi kara amuuraha
Aan darawal laga dhigin!.
Haddaan dhallin diyaariyo
Ikhyaar naga duceystaa
Nafta deeq ku bixinoo
Degellada kuweenna ah
Daafac loo adkaynoo
Inuu cadowgu daakhilo
Nagu falo dayuusnimo
Diidnay aanay dhihinoo
Degin meel dhufaysoo
Aanay doonan geerida!.
Haddaanay kala dambayntii
Sharci diin ku dhisan iyo
Wax maatida daryeeloo
Ay ku doogsadaan iyo
Qorshe soo dejininoon
Shacabkuna la daadihin
Wallee waan degeynaa
Waana dayro gabonnimo !!
Dulmi soo jireeniyo
Wixii daqalka naga riday
Daaquudka koray iyo
Diimahaan la garanayn
Haddaan daawo loo helin!.
Da'da soo koraysaba
Dugsiyada haddii aan
Is daryeelka lagu barin
Lagana deyrin quursiga
Wallee waan dagaynaa
Waana dayro gobannimo!!
Intaas waa digniin iyo
Dareenkii i saaqiyo
Suugaanta ii diray
Kana daali maayee
Aan sooba duubee
Daahir waxan ku leeyahay:
Dheemanka la daawado
Waxa maal dunida yaal
Haddii layku soo daro
Dirhamkuba ma goyn karo
Wax lagugu daweeyoo
Daqarradi ku gaariyo
Dambigii lagaa galay
Daliil looma heli karo
Wixii lagugu dayrshee
Xal sideen u doonnaa?!
Shalay iyo dorraataba
Dushaadeey ku huruddee
Ka yaqaan dariiqee
Hadday maanta dagantahay
Daruurtaan tagnaa iyo
Dusha saraan laleynaa
Dafo xoog leh baan nahay
Haddii daaf ay noqotoon
Bilaash doobbintii jirin!.
Digdigtii iyo faankii
Hadduu Gabbalkood dumayoo
Durba qaar inkirayoo
Kuwii shalay la duri jiray
Maanta laysku dilayoo
Dacwo laysku dhiiboo
Misna laysu diidaba!.
Wax laguu darraadaba
Dalaafkii hadduu yimid
Hadday dani run sheegtoo
Dayrkaa la tubanyahay
Sii daryeesho mooyee
Daa'im inu ku saacido
Waa ehel dambaabee
Ha ku dayan walaaloow!!.
Mid necbaan la duufiyo
Cadow kuu dahsoon iyo
Dillaallada ka dheeroow
Daawgii rasuulkiyo (SCW)
Dugso samirka waligaa
Kalsoonida ha sii dayn
Walaal waa la doogiye
Dhaqso yaan la dacaroon
Yey degdegi wax kuu dhimin
Dayrna waan sugaynaa
Uu khayrku da'o iyo
Gugoo noo darooroo
Dambarsane ayaa curan
Inta samaha doontoo
Ka damqaday dhibkaagoo
Kula duuban baa badan!
Ma daalaha wax garadkiyo
Dareen kula wadaagoo
Ergo daacadaad heli
Rag ka diiray xumihiyo
Ciidan dirirayaa jira
Iyagoo dirays qaba
Waxa ay dalbanayaan
Diyadaad lahayd iyo
In daynkii laguu gudo
Xaal laguugu sii daro
Dallacaad laguu qoro
Damaashaad la wada galo
Oo laguu dabbaaldego!.
Waxan dooddi uga baxay
Dulmi kii u haystoo
Diintiisa jecel bay
In cuqdaddii ay duushoo
Ay shiddo dareertoo
Iftiin uu u daarmaa
Dar ilaah widaayoow
Duco caama noo mari
Aamiinna igu daa!!